एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि : ५८ जिल्लाबाट को को आए ? (नामावली सहित) - Globe Nepal
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि : ५८ जिल्लाबाट को को आए ? (नामावली सहित)
ग्लोब नेपाल	सोमबार, २९ कार्तिक २०७८ गते १७:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २९ कात्तिक । नेकपा एमालेको आसन्न १०औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । १०–१२ मंसिरमा हुन लागेको १०औँ महाधिवेशनका लागि ५८ जिल्लाबाट प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् ।
यी हुन् ५८ जिल्लाका प्रतिनिधि :
दलितः जनक विक ।